Yiziphi Izindima Ezidingekayo Emnyangweni Wokumaketha Ngedijithali Wanamuhla? | Martech Zone
Yiziphi Izindima Ezidingekayo Emnyangweni Wokumaketha Ngedijithali Wanamuhla?
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 1, i-2022 NgoLwesine, Februwari 3, 2022 Douglas Karr
Kwamanye amaklayenti ami, ngiphatha wonke amathalenta adingekayo emizamweni yabo yokumaketha kwidijithali. Kwabanye, banabasebenzi abancane futhi sengeza amakhono adingekayo. Kwabanye, banethimba eliqinile ngendlela eyisimanga ngaphakathi futhi badinga nje ukuholwa jikelele kanye nombono wangaphandle ukubasiza ukuthi bahlale benobuhlakani futhi babone izikhala.
Ngenkathi ngiqala ukwethula inkampani yami, abaholi abaningi embonini bangeluleka ukuthi ngenze ngokukhethekile futhi ngenze indima ethile; kodwa-ke, igebe engilibonile ezinkampanini eziningi ukuthi bekuqabukela babe neqembu elilinganiselayo futhi laveza izikhala kumasu abo ezingabonakali. Lokho bekungasho ukuthi behluleka nganoma iyiphi indlela, bekusho nje ukuthi bebengafinyeleli kubungako babo ngokugcwele ngezimpahla ababenazo.
Ingabe Kufanele Uqashe Noma Uzakwethu?
Akuyona yonke inhlangano enezinsiza zokuqasha abasebenzi besikhathi esigcwele. Namuhla, akuvamile ukuba nozakwethu wangaphandle emizamweni yakho yokumaketha yedijithali.
Ukulayishwa Kwamathuluzi - Nginokufinyelela kuma-toolsets wamabhizinisi engikwazi ukukhokha izindleko zamakhasimende wonke. Lokhu kungonga inkampani imali impela.
Focus - Njengomthombo wangaphandle, ngiba nethuba elihlukile lokungazikhathazi ngokusebenza kwenkampani, imihlangano, ezombusazwe, noma imingcele yesabelomali (iningi lesikhathi). Ngivame ukuqashwa ukulungisa inkinga bese ngiyiphishekela lokho ngokungaphezi - nenkampani ekhokhela inani engilinikezayo kunokuba ngithole umholo ongakhipha noma ongakhiqizi.
Inzuzo - Cishe yonke inkampani inenzuzo, ngakho-ke ngiyakwazi ukumboza izikhala kumakhono lapho amaklayenti ami enabasebenzi abaphendukayo. Futhi cishe yonke inhlangano inenzuzo!
Ukuqaliswa - Ukusebenzisa izixazululo ezintsha kungakhokhisa iqembu futhi kukhungathekise abasebenzi bakho. Ukuletha uzakwethu ukuze asetshenziswe kuyindlela enhle yokuthola ulwazi lwesikhashana nezinsiza ozidingayo ukuze usebenzise ngempumelelo.
Isikhathi sonyaka - Izinkampani zivame ukuba nezidingo zesizini ezedlula izinsiza zazo zangaphakathi. Ukuba nozakwethu omkhulu ongakhulisa abasebenzi bakho kuyasiza ngezikhathi ezimatasa.
Ubuchwepheshe beNiche - Izinkampani eziningi azikwazi ukuqasha isisetshenziswa sayo yonke indima edingekayo, kepha ngithuthukise leyo nethiwekhi yamakhono eminyakeni edlule nabaholi abafakazelwe. Lokho kusho ukuthi ngingaletha izindima ezidingekayo njengoba kudingeka, ngisebenzisa ibhajethi kahle futhi ngilethe izingqwele zangempela ezizonyusa amathuba okuphumelela.
Ubuchwepheshe Obubanzi - Ngokusebenza ezimbonini zonke nokuhlala phezu kwamathrendi wemboni, ngiletha izixazululo ezintsha kumakhasimende ami. Uma sihlola isu noma ipulatifomu enkampanini eyodwa futhi isebenza kahle, ngiyiletha kuwo wonke amaklayenti ami futhi ngiyisebenzise ngobunzima obuncane kakhulu kunokuba iklayenti lizenzele ngokwalo.
Lokhu infographic kusuka Spiralytics, Ungayakha Kanjani Ithimba Lakho Lokumaketha NgeDijithali, Imininingwane izindima eziyi-13 ezidingekayo ukuze iqembu lesimanje lokumaketha ledijithali liphumelele.
I-Digital Marketing Aptitude
Iminyango yezokukhangisa yanamuhla ingaphansi kwengcindezi enkulu. Kuvame ukuba nezingcindezi zokunciphisa abasebenzi, ukuthuthela kumathuluzi amasha, futhi njalo ukukhulisa ukumaketha ngokusebenzisa izindlela ezintsha neziteshi. Kunzima ukuthi amaqembu ezentengiso asungule izinto ezintsha esebenzisa izinsiza ezilinganiselwe… ungakhathazeki ukwenza imisebenzi yansuku zonke. Njengoba sibheke ukuqasha izinsiza zamathimba ethu noma senze izincomo kumakhasimende ethu, sivamise ukuhlola indlela yokuziphatha ukuze siqinisekise ukufaneleka okufanele…hhayi nje amakhono afanele… aqashwa ku:
Ukuzikhuthaza - Njengoba unesikhathi esincane sokuqondisa nokusiza eqenjini lezentengiso, kufanele uthole abasebenzi abakhululekile ngokucwaninga nokuthola ulwazi abaludingayo ku-inthanethi. Ukulinda ukuqeqeshwa akudingekile namuhla uma sibheka ulwazi lomhlaba sisesandleni sethu.
Indima Eguquguqukayo - Iminyango eminingi yezokuthengisa ayinazo izinto ezimbili endaweni ngayinye, ngakho-ke ukuqeqeshwa okuhlukahlukene kanye nokuguquguquka kwendima kubalulekile. Umklami wezithombe angase adinge ukuthi agxumele kunkundla ye-imeyili futhi aklame i-imeyili. Uchwepheshe wenkundla yezokuxhumana angase adinge ukubhala ikhophi yesayithi. Ukuthola abantu abangakhululekile nje ngezindima ezishintshashintshayo kodwa ababheke ngabomvu kumnandi.
I-Risk-Tolerant - Ukuthengisa kudinga ukuhlolwa nokwehluleka ukukhomba amathuba okuphumelela. Ukuba neqembu eliphikisayo kuyindlela eqinisekile yokunciphisa inqubekelaphambili yakho ngenkathi izimbangi zakho zigxumela phambili. Ithimba lakho kufanele liqonde imigomo futhi liphokophele phambili ukuze lifunde, lilungise, lenze ngokugcwele, futhi lidlule okulindelekile.
Logic Creativity - Ukuqonda idatha nezinqubo kuyikhono elibalulekile lawo wonke amalungu okuthengisa. Amalungu eqembu lezokumaketha kufanele akwazi ukuhlaziya izinqubo nemiphumela futhi athole izixazululo zokudala ukuze anqobe izithiyo.
Ikhono Lobuchwepheshe – Izwe ledijithali futhi kubalulekile ukuthi ube nethimba lezentengiso elinolwazi ngobuchwepheshe, elilambele ama-automation, nelibheke ekwandiseni ulwazi lwemakethe yakho oyihlosile ngomkhiqizo wakho.
Ngokombono wami siqu, ukutshala imali ekuhloleni ukuziphatha ukuze uqinisekise ukuthi ilungu leqembu lingaphumelela ngokuzimela, kanye nethimba lakho, futhi ngaphakathi kwesiko lenhlangano yakho kufaneleka isisindo salo ngegolide. Uma ufuna umaqondana, ngiphoxekile ukuthi nginganwebisi iqembu lethu ku Highbridge.
Izindima zoMnyango Wezokukhangisa Kwidijithali:
I-Digital Marketing Manager, Umphathi Womkhankaso, noma Umphathi wephrojekthi - ukwengamela amaphrojekthi kanye nokuqinisekisa ukuthi ithimba nemikhankaso yakho isebenza ngempumelelo futhi ihlangabezana nezidingo zenhlangano.
Umqondisi wokudala or Umklami wezithombe - ukugcina ukungaguquguquki okubonakalayo kokuxhumana komkhiqizo ngeziteshi zedijithali.
Abathuthukisi noma Abaqambi Besixazululo - ukuhlanganiswa nezinto ezisebenzisanayo ziyimfuneko kuyo yonke inhlangano kulezi zinsuku, ngakho-ke ukuba nethimba elilungiselelwe ukwakha isiphetho esiqinile esinolwazi olunzulu lomsebenzisi ekuqaleni kubalulekile. Uma inhlangano yakho inethimba lokuthuthukisa ngaphakathi kwe-IT, kubalulekile ukuthi iyinsiza okwabelwana ngayo eklonyeliswa ikhono layo lokuvumela iqembu lakho.
Umhlaziyi Wokumaketha Kwedijithali - kubalulekile ukuthi wonke amaqembu wokumaketha edijithali abe nezindlela ezihleliwe zokukala umthelela wawo kanye nokubika okusebenzayo okuzosiza ubuholi neqembu ukuthi babone imiphumela.
I-Digital Marketing Strategist - konke okwenziwayo kufanele kusize ukushayela izinkomba zokusebenza ezibalulekile nezinhloso eziphelele zenhlangano. Usomaqhinga uhlanganisa lezi zingcezu ndawonye futhi aqinisekise ukuthi zonke iziteshi, abasebenzela imithombo yezindaba, kanye nabezindaba baxhunywe ngokuphelele.
Umphathi we-SEO noma Uchwepheshe - izinjini zokusesha ziyaqhubeka nokuhola zonke iziteshi ngomsebenzisi injongo ukucwaninga ngesinqumo sokuthenga. Amapulatifomu okusesha we-Organic ahlinzeka ngenqwaba yolwazi amaqembu wokumaketha edijithali angalusebenzisa kanye nesiteshi esiphelele esingenayo semikhombandlela yokushayela. Ukuba nomuntu oshayela lezi zindlela ezingabizi kuyadingeka kuyo yonke inhlangano.
Sesha Isazi Sokukhangisa - ngenkathi ukusesha okuphilayo kudinga umfutho negunya lokuhola kumakhasi womphumela wokusesha, ukukhangisa kungagcwalisa igebe lokushayela imikhondo. Akunakho ngaphandle kwezindleko nobuchwepheshe, noma kunjalo. Ukuthenga izikhangiso kungaba yiphutha elibi kakhulu nelibizayo uma ungenabo ubuchwepheshe.
Isazi Sokukhangisa - kukhona amanye amasayithi aphethe izethameli ozama ukufinyelela kuzo, ngakho-ke ukukhangisa kulawo masayithi ukushayela ukuqwashisa, ukuzibandakanya nokuguqula isu eliqinile. Kodwa-ke, inani lamapulatifomu esikhangiso, amakhono wokukhomba, izinhlobo zezikhangiso, nokuhlukahluka kokuhlola akuyona into emfushane ngesayensi. Ukwenza umuntu akhulise umthelela wokukhangisa kwakho kokubonisa kufanele.
Umphathi Wezokuxhumana Komphakathi noma Uchwepheshe - imithombo yezokuxhumana iyaqhubeka nokuba ngumthombo wokuzibandakanya nabathengi bakho kanye nesiteshi esihle sokuthuthukisa igunya lakho lomkhiqizo noma lobungcweti. Ukuba nothile ocwaningayo, aqaphe, futhi akhulise umphakathi wakho ngokugqugquzela, ukwesekwa kanye nolwazi kuyisu eliqinile lanoma iluphi uhlobo lwesimanje.
Okuhlangenwe nakho komsebenzisi or Umklami Wokuguqulela Komsebenzisi - Ngaphambi kokuthi unjiniyela wakho wangaphambili akwazi ukubhala ulwazi, kuzomele luthuthukiswe futhi luhlolwe ngokuphelele ukunciphisa ukukhungatheka nokwenza ngcono ukwaneliseka kwamakhasimende. Ukuba nomuntu oqondayo ukwakheka kwesixhumi sekhompyutha komuntu kuwukutshalwa kwemali okudingekayo lapho kuthuthukiswa lezo zimo.
Umlobi - Amaphepha amhlophe, amacala wokusebenzisa, izindatshana, okuthunyelwe kubhulogi, kanye nokubuyekezwa kwemithombo yezokuxhumana kudinga ababhali abanekhono abangakhombisa ngokuphelele ithoni, ubuntu kanye nolwazi ozama ukusabalalisa. Ukuba nomlobi kubasebenzi kungaba ukunethezeka kwabaningi… kepha kubalulekile uma ufuna ukuthi utshalomali kokuqukethwe kwakho lube nomthelela.
Umaki we-imeyili - Kusuka ekuhanjisweni, kuya kulayini wokufunda, ekwakhiweni kokuqukethwe… i-imeyili iyindlela yokuxhumana eyingqayizivele edinga ithalente nobungoti ukuthola imiphumela. Amabhokisi ethu okungenayo agcwele kulezi zinsuku, ngakho-ke ukuthola ababhalisile ukuvula nokuchofoza kuyinselele.
Uchwepheshe Wokumaketha Okuqukethwe noma Usu Lamasu - Yiziphi izihloko amathemba akho namakhasimende azifunayo? Ngabe umtapo wolwazi wokuqukethwe owukhiqizayo ubukeka kanjani? Usomaqhinga wokumaketha kokuqukethwe usiza ukubeka phambili nokubona izihloko ezizoduma… kanye nokuqinisekisa ukuthi uhlala uyinhloko yomncintiswano wakho.
Tags: umakethi wedijithaliukudayiswa kwe-digitalizikhundla zokumaketha ezidijithaliizindima zokumaketha ezidijithaliiqembu lokumaketha ledijithaliiziqu zokumaketha ezidijithaliumklami wemifanekisoizihloko zemisebenzi yokuthengisaiqembu lokumakethaisazi sokumaketha kwezokucingaumphathi we seoisazi sezokuxhumanaizixazululo umakhi